Fisafidianana fitaovana - Suzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Ny haavon'ny fahamendrehana: Ny fitaovana dia mety ho marin-toerana ao anatin'ny fotoana iray, na ao anatin'ny fe-potoana iray, fa tsy mety hisy olana.
Fitaovana: fitaovana fitaovam-piadiana girara amin'ny alàlan'ny firaka 20 Cr-Mn, ny fitaovana dia manatsara ny fanoherana ny vokatra, miantoka ihany koa ny hamafiny.
Fahamarinana: fametahana milina → fanadiovana hafanana → fanaovana vy → fanimbana → fikolokoloana fitaovana, manatsara be ny fiainana 5-10 heny.
Tanjaka: Raha jerena ny fiantraikan'ny fiasan'ny fitaovana fanaovana biriky, noho izany ny fiakarana avy amin'ny singa fiarovana amin'ny famolavolana in-1-2.
Firafitra: Amin'ny famolavolana rafitra, toy ny hery extrusion axial extrusion ampitaina amin'ny alàlan'ny bearings thrust roller, ary avy eo niparitaka tamin'ny singa fototra, ka nahatonga ny spindle masinina extrusion tsy misy hery axial, ny hery radial ihany.
Tsotra: Toy ny fakantsary fakantsary any Japon, azon'ny rehetra ampiasaina izany.
Fahombiazana amin'ny vidiny: Fandinihana feno ny angovo mahomby amin'ny angovo, ny fomba fampiasam-bola amin'ny toerana mitovy, fampitomboana ny fampitomboana ny famokarana sady mampihena ny angovo sy ny vidin'ny famokarana hafa.
Fandrosoana: Ny rafitra robot azo itokisana, malefaka ary mety.
Rafitra mari-pana, rafitra famoahana entana ary rafitra fonosana biriky mena, mampihena ny asanao.
Serivisy: Fitaovana azo alain-tahaka dia tsy maintsy dinihina ny fahaizan'ny mpamatsy aorian'ny serivisy sy serivisy serivisy, rafitra matanjaka aorian'ny fivarotana manohana fitaovana azo antoka.
► valiny ara-potoana ► serivisy matihanina ► taratra serivisy ► serivisy mijanona iray
Hevi-dehibe momba ny serivisy: hamaivanina ny olan'izy ireo, zavatra kely tsy misy dikany, ho an'ny serivisin'izy ireo manokana, noho izany dia hanafohezana ny fotoana, hanakaikezana, hampihena ny vidiny ary hampihena ny vidiny, hanatsara ny famokarana ny mpampiasa ary ny serivisy marika.
Mifantina: Fomba mety hisafidianana ireo fitaovana mety, tsy misy karazana fitaovana manerantany mety amin'ny fizotrany rehetra.
Fitaovana samihafa Bata maitso samy hafa Fomba fitam-batana samy hafa auger
Haavo samy hafa
Misafidiana zavamaniry fanaovana biriky hafa